Yakavhurwa Mitambo 2020 - Wepamusoro Sites mashanu Ekutamba Pamhepo - Kutamba
Yakavhurwa Mitambo 2020 - 5 Akanyanya Sites Ekutamba Pamhepo
Kutamba pamhepo ndiyo nzira iri nyore yekuzvivaraidza mazuva ano. 2020 igore rekutsvaga nzira nyowani dzekuzvivaraidza nadzo. Kune matani emawebhusaiti uye maapplication anowanikwa paInternet.
Izvi zvinokupa iwe zvakanakisa zvemukati zvekuzorodza pfungwa dzako. Zvinowanzo kuve zvakakosha kutora zororo kubva kune yakasarudzika hupenyu. Tinokurudzira kuti iwe utarise ino gwara. Chinangwa ndechekukupa iwe mashanu eakanakisa masosi ekutamba online. Aya ndiwo runyorwa rwemitambo unblock saiti iyo inoshanda kwese kwese. Pachave pasina nyaya neako network network. Vashandisi vanogona kutamba navo kubasa kwavo, kumba kana kuchikoro michina.
Rondedzero Yemasosi Akanakisa Ekutamba Akavhurwa Mitambo:
Nguva zhinji iwo maratidziro epachivande emasangano mashoma ane zvirambidzo munzvimbo. Izvi zvinobudirira kudzikisira zviitiko zvisina basa zvekuparadza nguva. Kuburikidza neMavhura mawebhusayithi emitambo, zvinova nyore kutora mabhureki mashoma. Chero ani zvake anogona kushandisa idzi sarudzo kubva kuPC yavo. Aya ndiwo akajairwa maficha mutambo mawebhusaiti pa internet. Heano akanakisa mapiki atakawana pane internet.
Iyo Eunblocked webhusaiti ine plethora yemitambo kune chero munhu anofarira kupenya mazita. Inosanganisira zvimwe zvekare zvekare seyaMavhiri Anofara, shiri dzinopenya uye zvimwe zvakawanda. Saiti yacho ndeyekutanga asi inouya neraibhurari yakanaka. Kune akasiyana marudzi evashandisi ekutsvaga.
Unogona kuiwana iri nzira huru yekushandisa yako yemahara nguva. Vanhu vazhinji vanobatana nepuratifomu mazuva ese kubva kumakomputa emakomputa avo.Ini ndinonakidzwa nemutambo we2048 pane ino webhusaiti. Ndiwo mutambo unozivikanwa wemafoni efoni zvakare.Musoro uri nyore unouya uzere nemufaro.
Kune mimwe mitambo isingaverengeke inonakidza senge iyi. Bhawa rekutsvaga rinokubatsira iwe kuwana ako aunofarira mazita. Iyo yakakwana kune chero munhu anofarira anokurumidza uye ekupindirana ma tag. Iyo webhusaiti inoshanda pane yakavharwa internet network senge chikoro chako nehofisi. Eunblocked ine chete mitambo yekupenya izvozvi. Adobe Flash player ichavhara munguva pfupi.
2. Yakavhurwa Mitambo Guru
Kuvhura mitambo ingave iri basa rakaoma. Iko hakuwanzo mashoma mashoma mawebhusaiti pamhepo anouya nemitambo inonakidza yepamhepo. Iyo Yakavharwa mitambo guru webhusaiti yakanakira vadzidzi vechikoro. Iyo yekushandisa interface ine mavara uye yakasarudzika. Iyo zvakare ine imwe systemic nyowani HTML 5 mitambo. Izvi zvinoshanda neese mabrowser emazuva ano. Kune akasiyana marudzi anowanikwa papuratifomu. Iwe unogona kuongorora uye kuyedza izvo zvinosangana nezvinodiwa zvako.
Iyo webhusaiti dhizaini yakakosha asi ine mamwe makuru mazita. Ini ndinonakidzwa neyemwenje mijaho mitambo pawebhusaiti.Ace gangster inouya neimwe epic Gameplay ruzivo.Iwo wakasarudzika, asi wakananga mutambo. Izvo zvinotevera hukuru hukuru auto nguva.Wese munhu anofarira mutambo wekupara mhosva mazuva ano. Chero ani anofinhwa muhofisi yavo anogona kuzviedza.
3. Yakavharwa Mitambo 66
Iyo chikuva chakasarudzika uye chakakurumbira zvakanyanya pakati pevadzidzi vechikoro. Vazhinji venyu vangatoshandisa izvi kare. Iyo inokupa iwe nyore kuwana kune ako ese aunofarira flash uye HTML 5 mitambo yemahara. Kune akawanda marudzi uye mhando dzemitambo pano. Unogona kutamba chero chinhu kubva kumitambo kuti upfeke mitambo. Iyo webhusaiti yakasarudzika uye inowanikwa nyore. Iyo ine yakapusa vhezheni yeMinecraft futi.
Vanhu vazhinji vanoshandisa chikuva cheiri raibhurari yakakura. Iyo yekusimbisa yakasununguka kutamba vhezheni yeMinecraft. Ndiwo mutambo wakabhadharwa, uye vazhinji vechidiki vatambi vanonakidzwa neiyi platformer. Musoro unogona kudhura. Wese munhu haawane mvumo yekutenga mitambo yavo online. Isu tinodawo zvekare zvekare seFlappy Shiri, Slither.io uye Tetris. Inoshanda 100% yenguva. Pakazara uchave nenguva yakanaka nebasa iri.
Kushanya - https://sites.google.com/site/unblockedgames4me/ .
4. Svinura mitambo pod
Iyo webhusaiti itsva kune vakawanda vanhu. Kudzivirira mitambo pod ine mamwe mazita makuru.Ichashanda pane chero chikoro kana hofisi network. Iyo yakachengeteka kubva kune vanovharira webhusaiti. Kazhinji webhusaiti haizivikanwe neaya maturusi esoftware. Raibhurari yakakura ndicho chinhu chayo chikuru. Unogona kuwana kuwanda kwemitambo kuuraya imwe nguva. Kana iwe uri kufinhwa kubasa kana kuchikoro, saka shanyira ino webhusaiti.
Iyo yekushandisa interface iri zvakare nyore kunzwisisa. Unogona kudzivisa kushambadza uye shady flash player glitches. Izvo hazvivimbe nebrowser wedzera ons. Isu tinofarira Super Mario bros classic pawebhusaiti. Inounza zvakawanda zveyeuko.
Iwe hauchade emulator zvekare. Shanyira webhusaiti uye tanga kutamba pakombuta yako. Mazuva ano mutambo wave nyore kwazvo nerubatsiro rwemawebhusaiti akadaro. Iyo yekutsvaga bar inokubatsira iwe kuwana akanakisa mazita zviri nyore.
Kushanya - https://www.unblockedgamespod.com/
5. Yakavhurirwa mutambo wepasirese
Iyo isina kuvhurwa mutambo wepasirese iri nyore kuwedzera kumasayiti Google fomati. Inowanikwa nyore nyore kubva kune chero komputa. Iyo yekushandisa interface papuratifomu yakakosha. Ivo vari kuyedza kuita nharaunda kuburikidza newebhusaiti yavo. Vashandisi vanogona kukumbira mitambo kubva kune vanogadzira vachishandisa iri nyore fomu reGoogle.
Iri basa rakanakisa iro rine hanya nevashandisi. Kune matani emataira aripo. Unogona kusarudza mutambo kubva kuruboshwe rwechiso chako.
Iyo ine matani esarudzo ayo anoshanda zvakanyanya. Iyo webhusaiti iri nyore asi haina kukanganisa pamitambo. Icho chiri nyore chinongedzo chinobatsira iyo webhusaiti kudzivirira kudzivirira kubva kune webhusaiti blocker software. Isu tinofarira mutambo we curveball pane ino saiti. Iwo mutambo unonakidza wekutamba kana iwe uchinetseka. Ivo zvakare vane yemahara vhezheni yeiyo yakasarudzika Doom mutambo.
Kushanya - https://sites.google.com/site/unblockedgameworld/ .
Maitiro Ekudzivisa kushambadza?
Kushambadzira idambudziko rinogara riripo nemaapplication aya. Vazhinji vashandisi vanovenga izvo zvinoramba zvichikwira zvaunowana. Zvirinani kuisa mari mune sevhisi iri nyore kushandisa. Yakareruka ad-block software ichabvisa zvese zvinoshungurudza kushambadza. Pop-ups zvakare iri dambudziko rakajairika neaya emahara kutamba mapuratifomu. Heano mapikicha epamusoro ekuderedza matambudziko ako.
Iyo pop-up blocker inokumisa iwe kubva kune inogumbura kushambadzira pop-ups. Zviri nyore kuwana uye hazvidi kushanda nesimba. Kushanya - https://poperblocker.com/ kuti uwane izvi pane browser rako.
ZveAdBlock, tinokurudzira hola kushambadza. Zviri nyore kuwedzera chiwedzerwa kune chero browser. Unogona kuikanda kubva kune chrome webhu chitoro.
Yakavhurwa mitambo iri yakanakisa nzira yekuti iwe ushandise yako yakasarudzika nguva. Iwe unogona kubvisa kunakidzwa uye kudzikisira kushushikana kwako. Chero ani zvake anogona kunakidzwa neakanakisa chikuva chemahara zvachose. Muchirongwa ichi, tinowedzera edu mashanu pamusoro. Izvi zvakakwana kune vashandisi vanoda mitambo yakasiyana. Edza ivo nhasi uye deredza kunetseka kwako.
Ungawana Sei Disney Plus Mudzidzi Discount?
iPhone 11 Pro Max Muenzaniso Nhamba (A2161, A2218, A2220)
Yakanakisa Samsung Smart TV Apps (2020) - Yemahara & Inobhadharwa
Yemahara Yemafirimu Ekuparadzira Masites (2020) Pasina Sign Up & Kudhawunirodha
6 Yakanyanya VPN yeNetflix - Zvita 2020
Chii Chaunotarisa pane Disney Plus? Yekupedzisira Mafirimu & TV Shows
50 Best Mafirimu Ekutarisa Pane Prime Vhidhiyo
Nzira yekuwana Rubatsiro muWindows 10?
Netflix Dhawunirodha Limit - Zvese Zvakatsanangurwa muDudziro
Twitch Prime Yemahara Mitambo - Zvita 2020
Yakanakisa TeamViewer Dzimwe nzira dzaunofanira kuedza (2020)
steam sei kugadzirisa mutambo
sei kusununguka hulu ne spotify
app kushandura youtube kuita mp3 android
nvidia geforce chiitiko chimwe chinhu chakakanganisa kodhi yekodhi 0x0001
nzvimbo dzakanakisa dzekuona terevhizheni pamhepo mahara
maitiro ekurodha alexa app pane pc
Varaidzo Sei Coupons Zvishongedzo Kutamba Zvipo Ongorora Softwares Zvirongwa Vpn Pc Lists Gadgets Zvemagariro